Dhatabhesi Inoda Kugadziriswa kana isiri iyo Dhatabhesi Faira
musha Products DataNumen Access Repair Iyo dhatabhesi 'filename.mdb' inoda kugadziriswa kana isiri dhatabhesi faira.
Ruzivo rwakadzama nezve "Dhatabhesi Inoda Kugadziriswa kana isiri Dhatabhesi Faira" Kanganiso
Paunenge uchishandisa Microsoft Access kuvhura yakashatiswa Yekuwana dhatabhesi faira, iwe unoona inotevera inotevera mhosho meseji:
Iwe kana mumwe mushandisi unogona kunge wakangoerekana warega Microsoft Office Access nepo Microsoft Office Access dhatabhesi yakavhurwa.
Iwe unoda here kuti Microsoft Office Access iedze kugadzirisa dhatabhesi?
uko 'filename.mdb' izita reiyo Access MDB faira inovhurwa.
Muenzaniso skrini unoratidzika seizvi:
Iwe unogona kubaya "Hongu" bhatani kuti rega Access igadzirise dhatabhesi. Kana Microsoft Office Access ikatadza kugadzirisa dhatabhesi yakashatiswa, inozoratidza inotevera meseji yekukanganisa:
Asingazivikanwe dhatabhesi fomati 'filename.mdb'
Iyo skrini inotaridzika seiyi:
Uye iwe unogona kudzvanya bhatani "OK" uye woona yechitatu mhosho meseji:
Iyo dhatabhesi 'filename.mdb' haigone kugadziriswa kana isiri iyo Microsoft Office Access dhatabhesi faira.
zvinoreva kuti Microsoft Office Access yakaedza napose painogona asi zvakadaro haigone kugadzirisa iyo faira.
Iyi inogona kutevedzwa Microsoft Jet uye DAO kukanganisa uye kodhi yekukanganisa ndeye 2239.
Kanganiso iyi inoreva kuti Access Jet injini inogona kucherechedza zvimiro zvekutanga uye tsananguro dzakakosha dhatabhesi re MDB zvinobudirira, asi tsvaga huwori mumatsananguriro etafura kana data repatafura.
Microsoft Access ichaedza kugadzirisa huori. Kana tsananguro dzetafura dzakakosha kune dhatabhesi rese dzisingakwanise kugadziridzwa, inoratidza iyo "Risingazivikanwe Dhatabhesi Fomati" zvakare uye kubvisa basa rakavhurika.
Unogona kuedza chigadzirwa chedu DataNumen Access Repair kugadzirisa iyo MDB faira uye kugadzirisa iyi kukanganisa.
Semuenzaniso yakashata MDB faira inokonzeresa iko kukanganisa. mydb_2.mdb
Iyo faira yakagadziriswa ne DataNumen Access Repair: dzakavanzika.mdb (Tafura ye'Recovered_Table2 'iri mufaira rakagadziriswa rinoenderana netafura ye'Vashandi' mune iri faira risati ravharwa)